> Resource> Naghachi> Top 5 Photo Recovery Software maka Windows na Mac
Photos jide kasị mma na-echeta nke a ihe omume pụrụ iche, a pụrụ iche onye ma ọ bụ a ọnọdụ. Ha jide ukwuu uru nke pụtara na ha ọnwụ nwere ike ịsụgharị mezue erasing nke na-echeta ẹkenịmde. E nwere Otú ọ dị ọtụtụ ụzọ iji hụ na ya na-adịghị ga-eme.
Mgbe foto na-renamed ọzọ ngalaba na bụ n'èzí foto katalọgụ omume Ohere inweta bụ na faịlụ ike-efu. Ọnọdụ dị iche iche na PicaJet Photo Recovery nke bụ otu ndị
• The kasị mma software iji maka nzube nke foto mgbake site na kọmputa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị otú ahụ na ngwaọrụ na a na-akwado nke a software.
• Ọ a foto mgbake atụmatụ ike na ya nke na-eme faịlụ mgbake usoro mfe ma nzi.
• Ọ Recovers ehichapụ photos nnọọ ngwa ngwa.
• Ọ dị mfe iji
• Mgbe ụfọdụ, ọ na-ewe oge dị ukwuu na-agbake ehichapụ oyiyi
Smart Image Iweghachite
Sistem: Windows 7 / XP, Vista
Ọ mmemmem usoro nke oyiyi na foto mweghachi nke ehichapụ jpg, gif na PNG oyiyi. Ọzọ ụdị pụrụ ịdabere na software na ike ga-eji na-agbake furu efu photos bụ Smart Image Iweghachite.
• Ọ nwere ihe pụrụ iche mma na-enye gị ohere iji kwụsị gị data search na mgbake usoro ozugbo ị hụrụ faịlụ ị na-achọ.
• Nke a photorecovery software bụ -ejedebeghị na mgbake nke jpg faịlụ formats naanị ma ndị ọzọ dị ka GIF na PNG dị ka mma.
• Ọ bụrụgodị ọkacha mmasị gị ndịna-emeputa nwere ike natara site ama formatted mbanye. Ọ bụ ezi nhọrọ ebe ọ bụ dakọtara na Vista, OS Windows na XP n'etiti ndị ọzọ.
• nchegbu banyere ụfọdụ furu efu photos? Na-echegbu onwe ọzọ ka a mfe iji software na-arụ ọrụ maka gị ka ị na-eche.
• Ọ dị mfe na mfe iji
• Ọ bụ ike naghachi ihe oyiyi na anọwo na-ehichapụ n'egbughị oge.
• Ọ bụ mgbanwe
• Ọ na-akwado e Ụdị GIF / PNG, JPEG / jpg
• ike-eji na ibughari ngwaọrụ.
Get Smart Image Iweghachite
Stellar foto mgbake
Ịwa Systems: Windows, Mac, Linux
O weghachiri ọ bụla ehichapụ music, videos na foto ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ụdị multimedia faịlụ. Stellar foto mgbake bụ nri choicewhether ọ bụ site adigital igwefoto, laptọọpụ, ebe nchekwa kaadị ma ọ bụ oche n'elu ị nwere ike ịgụ na a free foto mgbake software na-adịghị ga-eri gị.
• Ọ na-achọ ọ oru ihe ọmụma, ahụmahụ ma ọ bụ enyemaka ọ bụla iji . Ọ nwere ntụziaka doro anya n'ihi na onye ọ bụla na-eji Windows os.
• Ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma weghachi foto niile na ndị ọzọ na multimedia faịlụ na-adị dị iche iche faịlụ formats. JPEG na TIFF ụfọdụ nke foto faịlụ format na ị nwere ike iweghachi-eji nke a software.
• Ọ comprises nke iche iche ndị ọzọ mgbake ngwaọrụ dị ka nke ahụ nke na-akwado mgbake nke video faịlụ gụnyere itinye na koodu Movie Njikwa, VOB, OGG Media ọkpụkpọ na ọtụtụ ndị ọzọ.
• Ị pụkwara ijide n'aka nke iweghachi gị audio data na-esonụ formats; MP3, M4P, WAV na RPS dị nnọọ banyere ole na ole.
• Popular igwefoto ụdị dị ka Kodak, Fuji, Canon, Nikon na Olympus na-akwado site na nke a software. Nke a pụtara na ọ nwere ike iweghachi niile foto, oyiyi na ụdị ndị ọzọ nke data echekwara na ihe ọ bụla nke a na ngwaọrụ.
• Ọ nwere ike naputa niile oyiyi mfe n'ihi na ọ scrolling nhọrọ.
• mfe ma dị mfe iji.
• Ọ nwere ike na-enwe ike naghachi niile ehichapụ faịlụ na oyiyi.
• Ọ bụ ọnụ
Nke a software nwere ike iweghachi ehichapụ, emerụ na formatted foto site na diski ike draịva, dijitalụ ese foto na mobile igwe. Asoftech foto mgbake bụkwa ezi nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ uru nke ịdabere na stellar Photo Recovery ngwá ọrụ
• Ọ enyere na mgbake nke mmadụ na mberede ehichapụ oyiyi na audio faịlụ. Ndepụta nke faịlụ formats-akwado site na nke a software bụ ogologo oge.
• Nke a doo ya n'etiti ole na ole software na ike iweghachi furu efu foto site na nta niile ntị, dijitalụ ese foto nakwa dị ka ndị ọzọ na mpụga nchekwa ngwaọrụ gụnyere ebe nchekwa kaadị, PDA, Zip disk, ike mbanye na ọtụtụ ndị ọzọ.
• The Advanced n'ilu Njirimara arụ ọrụ nke ọma na photos ebe ọ pụrụ ime ka doo anya nke nwere obere isi awọ oyiyi na ọ bụrụ na ọ bụghị sụrụ nwere ike ghara ịbụ bara uru na niile ọbụna mgbe mgbake.
• The uru nke na-eji Asoftech foto mgbake ngwaọrụ nwere ọtụtụ na nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere ndị na-eji ya ebe ọ bụ na ọ bụ a pụrụ ịdabere na foto mgbake software.
• Ị nwere ike n'oge zuru ike na akụkọ nke furu efu data karịsịa na ịdị adị nke image mgbake software.
• Ọ dị mfe iji.
• Ọ nwere larịị interface
Sistem: Windows 7 / Vista / 2000 / XP
Wondershare Photo Recovery Abịa na ndị ọzọ uru nke oyiyi mgbake na foto mgbake dị ka mma.
• Ọ nwere kpọmkwem atụmatụ na-enyere onye ọrụ naghachi a scanned image-enweghị na-aga site na otu usoro ọzọ.
• N'ọnọdụ ka ukwuu bụghị ọ bụla Ewepụtara faịlụ ga-abụ nke mkpa unu, na foto mgbake software i nwere ike comfortably ịhụchalụ faịlụ n'ihi na ị na-eburu naanị ihe dị mkpa.
• E bụ ndokwa maka ịzọpụta free foto mgbake software na ike ga-ibudatara na Ịntanetị. Ozugbo ị ga-esi na foto mgbake software onwe gị na-aga n'ihu na-ebute na-ehichapụ foto mgbake usoro.
• Họrọ kpọmkwem foto naghachi
• Naghachi photos, ọdịyo na videos
• adịghị akwado FLV Format.